Ice Iwu mara
Satọde, Septemba 18, 2021
Nkwupụta Iwu a chọrọ ịgwa gị ikike gị yana ọrụ gị dị ka onye ọrụ weebụ a. N’ebe a, ị ga - achọta ozi niile ịchọrọ gbasara weebụsaịtị a, ọrụ ya, data onwe ya ọ na-anakọta na ebumnuche ya, yana iwu ojiji nke na-achịkwa iji weebụsaịtị a.
N'oge ị ga-enweta weebụsaịtị a https://www.goluego.com/, Na-ewere ọnọdụ nke onye ọrụ, yabụ ọdịnaya nke Nkwupụta Iwu Iwu a na-emetụta gị kpọmkwem. Ya mere, ọ dị mkpa ka ị gụọ ya iji wepụ obi abụọ ọ bụla nwere ike ịnwe ya ma nwee nghọta maka ọnọdụ ị na-anabata.
Iji bido, ị kwesịrị ịmara na weebụsaịtị a na-agbaso iwu dị ugbu a na nchedo data, iji nye gị nkwa, nchekwa na nghọta na, dịka onye ọrụ, zitere gị akwụkwọ mgbe ị na-eji weebụsaịtị a.
El RGPD (Iwu (EU) 2016/679 nke Ndị Ome Iwu Europe na nke Council nke Eprel 27, 2016 na nchebe nke ndị sitere n'okike) nke bụ iwu European Union ọhụrụ nke jikọtara ụkpụrụ nke nhazi data nkeonwe na mba EU dị iche iche.
La ỤLỌDỤ (Iwu Organic 15/1999, nke ọnwa iri na atọ nke ọnwa Disemba, na Nchedo nke Data Nkeonwe y Iwu eze 1720/2007, nke iri abụọ na abụọ nke ọnwa iri na otu nke ọnwa iri na otu, Iwu maka mmepe nke LOPD) nke na-achịkwa ọgwụgwọ nke data nkeonwe yana ọrụ dịịrị ndị ọrụ maka weebụsaịtị ma ọ bụ blog ga-eburu mgbe ijikwa ozi a.
La LSSI (Iwu 34/2002, nke July 11, na Ọrụ nke Societylọ Ọrụ Ihe Ọmụma na Azụmaahịa Elektrik) nke na-ahazi azụmahịa azụmahịa site na kọmputa, dị ka ọ dị na blog a.
Onye na-elekọta ya na onye nwe weebụsaịtị a bụ EGO
Aha mbu: Goluego
Ihe omume webụsaịtị: nkesa ọdịnaya metụtara Egwuregwu vidiyo, ngosipụta mgbasa ozi, na nkwanye nke ngwaahịa mmekọ.
correo electrónico: ContactGoluego@gmail.com
Data nke ị nyere anyị nkwenye gị, yana iji ya hibere na Iwu Nzuzo anyị, a ga-etinye na faịlụ akpaghị aka nke withlọ Ọrụ Spanish maka Nchedo Data, nke onye ahụ kwuru maka faịlụ ahụ bụ: EGO. Nke a pụtara na data gị enweghị nchebe, dịka iwu si dị.
Iwu gbasara ngwa agha
Dịka onye ọrụ nke weebụsaịtị anyị, ị nwekwara ọtụtụ ọrụ:
Willgaghị enwe ike iji webụsaịtị a wee rụọ ọrụ megidere iwu, omume, usoro ọhaneze na, n'ozuzu, iji rụọ ọrụ dabere na ọnọdụ edepụtara na Nkwupụta Iwu Iwu a.
Gaghị enwe ike mebe mgbasa ozi ma ọ bụ eme ihe na-emebi azụmahịa site na izipu ozi na-eji njirimara ụgha.
Will ga-akwụ ụgwọ naanị maka izi ezi na izi ezi nke ọdịnaya i tinyere na weebụsaịtị a yana data onwe gị ị nyere anyị ebumnuche atọrọ na Iwu Nzuzo anyị.
Ga-abụ naanị ọrụ maka ịme ụdị iwu ọ bụla na-akwadoghị, na-emerụ ahụ, na-emerụ ahụ na / ma ọ bụ na-emerụ ahụ na saịtị ndị ọzọ nke anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị na weebụsaịtị a maka mmepe nke ọrụ anyị.
Dị ka ọrụ dị na weebụsaịtị, EGO You nwere ike igbochi ọrụ nke ibe a onye ọrụ na-eji ma dozie mmekọrịta ahụ ozugbo ma ọ bụrụ na ọ chọpụta na ojiji nke weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ ọ bụla enyere na ya nke enwere ike ịtụle megide ihe a kọwara. Legaldọ aka na ntị gbasara iwu.
INTELLECTUAL NA INI IGBO EGO
Iwu saịtị a (ederede, onyonyo, akara ụghalaahịa, eserese, njirimara, bọtịnụ, faịlụ sọftụkọ, ụcha agba, yana nhazi, nhọrọ, nhazi na ngosipụta nke ihe ndị dị na ya) na-echebe iwu ndị nwere ugbu a. A machibidoro ọgụgụ isi na ụlọ ọrụ mmepụta ya, nkesa ya, mgbasa ozi ọhaneze na mgbanwe ya, ewezuga iji onwe ya na nkeonwe.
Dịka onye nwe weebụsaịtị a, EGO anaghị ekwe nkwa na ọdịnaya ahụ ziri ezi ma ọ bụ na-enweghị njehie ma ọ bụ na iji otu ihe ahụ n'aka ndị ọrụ anaghị emebi ikike ndị ọzọ. Ojiji ọma ma ọ bụ ihe jọrọ njọ na ibe a yana ihe dịịrị onye ọrụ.
N’otu aka ahụ, ngụkọta ma ọ bụ akụkụ akụkụ, nlọghachi, nwepụtaghachi, nyefee ma ọ bụ imepụta nke ozi dị na peeji ahụ, ihe ọ bụla ebum n’uche ya na ụzọ ejiri ya, amachibidoro, na-enweghị ikike izizi site na EGO.
Weebụsaịtị a gụnyere njikọ ma ọ bụ njikọ nke saịtị ndị ọzọ. Enyochaghi ibe ndị ọzọ a ma ọ bụ na-achịkwa anyị, yabụ EGO ọnweghị ike ịta ya ụta maka ọdịnaya nke weebụsaịtị ndị a, ma ọ bụ maka usoro ejiri usoro nzuzo ha ma ọ bụ ọgwụgwọ nke data onwe ha ma ọ bụ ndị ọzọ enwere ike ị nweta.
Ya mere, anyị na-akwado ka ị jiri nlezianya gụọ ọnọdụ nke ojiji, iwu nzuzo, ọkwa iwu na / ma ọ bụ ụdị saịtị ndị a.
AMAZON EGO EGO
Weebụsaịtị a, dịka ebum n’uche ya, na-eji njikọ mmekọ Amazon.
Nke a pụtara na ị ga - achọta njikọ nke ngwaahịa ngwaahịa Amazon ị nwere ike ị nweta site na webụsaịtị anyị ozugbo mana, ebe okwesiri, ịzụrụ ga - eme ya na Amazon, n'okpuru ọnọdụ nke ya n'oge ahụ.
EGO NA-EGO ANWETA
N'iji ikike gị dị ka onye nwe weebụsaịtị a, anyị na-agwa gị nke ahụ EGO abụghị ihe kpatara ọnọdụ ọ bụla maka ihe ndị a:
Ogo nke oru a, osooso nke nnweta, oru oma, nnweta ma obu ibu n’iru oru ihe a.
Ọnụnọ nke nje, malware, mmemme obi ọjọọ ma ọ bụ nke na-emerụ ahụ na ọdịnaya ahụ.
Ezighi ezi, ileghara anya, iji wayo ma ọ bụ megidere Iwu Iwu a.
Enweghị iwu, ogo, ntụkwasị obi, ịba uru na nnweta nke ọrụ ndị ọzọ enyere ma mee ka ndị ọrụ nweta weebụsaịtị a.
Nke mebiri site na iji iwu akwadoghị ma ọ bụ jiri blog a.
Iwu atumatu ya na nchekwa data
Ebe nrụọrụ weebụ a na-agbaso ụkpụrụ dị ugbu a na nchebe data, nke pụtara na, dịka onye ọrụ, ị ga-enyerịrị nkwenye gị kwupụtara tupu ịnye anyị data nkeonwe site n'ụdị dị iche iche emere na ngalaba nke ibe anyị.
Maka nke a, maka nghọta na iji ikike gị, ọrụ anyị bụ ịgwa gị gbasara data nke anyị na-anakọta, chekwaa ma hazie ya na ebumnuche ndị, n'inwe oge ọ bụla enwere ike iwepu nkwenye gị kpamkpam.
Enwere ike ịchọta ozi a niile na nke anyị IWU N'ALAEZE.
Ka anyị na-agwa gị ngwa ngwa ị banye na weebụsaịtị anyị, saịtị a na-eji kuki ya nke ndị ọzọ iji nye gị ahụmịhe ọrụ kachasị mma ma zụlite ọrụ anyị.
N'oge ọ bụla, ị ga-enwe nhọrọ ịhazi ihe nchọgharị gị iji jụ iji kuki ndị a, nke, n'ọnọdụ ọ bụla, ga-emetụta ahụmịhe onye ọrụ gị.
Iji nweta ozi zuru oke na iji kuki na weebụsaịtị a, ebumnuche ya na ọjụjụ ya, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị AKWOOKKWỌ OOKMOOKAKA.
AKW ANDKWỌ AKW ANDKWỌ NA-EKWU NA NJETA EGO
Nkwupụta Iwu a dị n'okpuru iwu Spanish dị ugbu a.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tupu ụdị esemokwu ọ bụla, EGOna onye ọrụ ahụ, na-agọnarị ikike ikike ọ bụla ọzọ, ga-edo onwe ya n'okpuru Courtlọikpe na ikpe nke ụlọ ọrụ nke onye ọrụ ahụ maka esemokwu ọ bụla nwere ike ibilite.
Na ihe omume na onye ọrụ na-biri na mpụga Spain, EGO ma onye ọrụ ahụ ga-edobe, na-ewepụ kpamkpam ikike ọ bụla, n'ụlọ ikpe Cádiz (Spain).
Ọ bụrụ n’inwee ajụjụ ọ bụla gbasara ọkwa Iwu a, ị nwere ike zitere anyị email KpọtụrụGoluego@Gmail.com.
Anyị na-eji Kuki iji tụọ mmekọrịta ndị na-ege ntị na ọnụ ọgụgụ. Ọ bụrụ na ị kwenyere, anyị ga-ejikwa kuki na data iji gosipụta mgbasa ozi ahaziri iche. Ọdịnaya na mgbasa ozi ahaziri iche nwere ike ịdabere na ọrụ gị, dị ka ọchụchọ ị na-eme na Google na vidiyo ndị ị na-ele na YouTube, a ga-egosi ha na ndụmọdụ dị mkpa na mgbasa ozi ahaziri maka ọdịmma gị.anabataGụkwuo